Sababta Aries waxay noqon kartaa lammaanaha ugu fiican Dhammaan calaamadaha jimicsiga! - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD Sababta Aries waxay noqon kartaa lammaanaha ugu fiican. Dhammaan calaamadaha jimicsiga!
Aries waa calaamada koowaad ee wareegga jodiga iyo asalkiisuna waa ku guuleystey dabiiciga. Runtii, Ramsamku wuxuu leeyahay awood shaqo iyo go'aamo ah in qof kastaa rabo! Inkasta oo ay adag tahay in si joogta ah loogu sheego hab diidmo ah, tani waxay si dhab ah u tahay waxa ay ka kooban tahay xooggooda ugu muhiimsan waxayna ka caawisaa inay gaaraan waxyaabo waaweyn.
Hase yeeshee, dad yar ayaa og in Aries ay wada-shaqeeyn wacan ku sameeyaan xiriir jaceyl ah.
5 sababo macquul ah oo loola jeedo Aries
1. Way toosan yihiin
Dhiso a xiriirka Aries way fududahay maxaa yeelay wuxuu si toos ah ula wadaagi doonaa aragtidiisa. Haddii uu wax jecel yahay, si dhakhso ah ayaad u ogaan doontaa, waxana uu kaa rajeyn doonaa inaad isku mid tahay. Ma haysan doonto sir; xaqiiqada waa tayad aad u badan oo la raadsado ka dib markii Aries la yiraahdo. Ha noqonin qarsoodi lammaanahaagu waa mid ka mid ah furayaasha lamaanaha guusha leh.
2. Waxay mar walba isku dayaan inay joogaan xaalad wanaagsan
Aries mar walba isku day inaad aragto dhinaca dhalaalaysa, xitaa bartamaha maalin xun. Dhibaato shaqo? Aries waxay u qaadan doontaa waayo-aragnimo abaalmarin ah. Taasi waa sababta aysan marnaba "dib ugu soo celin" niyad xumadooda guriga. Waxaa intaa dheer, dabeecad wanaagga waa faafi!
3. Faa'idada dadka ay jecel yihiin waa muhiim iyaga
Aries waxay u muuqan karaan wax yar oo qabow ah, laakiin dareenka ay dareemayaan dadka ay jecelyihiin waa run. Ku faraxsanaanta kuwani waa mid aad muhiim ugu ah iyaga, waxayna badanaaba dareemayaan masuuliyadooda wanaagooda.
4. Waxay ixtiraamaan meelaha gaarka ah ee dadka kale
Aries ma ayan dhibin qofna ay joogaan jacaylkooda jacaylku marnaba kama cabbin. Haddii aad dareensan tahay baahida, Aries ayaa keligaa kaa tegi doonta, laakiin waxa uu helayaa kahor hab aad kuugu dejinayso niyadda wanaagsan oo kaa soocaysa go'doomintaada sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan.
5. Way ogyihiin sida loola yaabay
Xitaa sannado badan oo guur ah, Rams weli waxay helayaan siyaabo cusub oo la yaabi kara kuwa jecel. Waxay ku dhasheen jacaylka iyo waligood ma daali karaan dareenka yaryar ee ay jecelyihiin. Haddii aad ku nooshahay Aries, noloshaadu uma badna inaad bogsato!
Ma waxaad fursad u heshay inaad ku ag dhawaato hooyadaa Aries? Miyaad ku raacsan tahay in calaamadkani ay leedahay dhammaan tayada ay ku sameyn karaan lamaanayaasha ugu fiican iyo musharaxiinta guurka? Noo sheeg waxa aad ka fekereyso faallooyinka!
Mawduucaan maqaalkani waa ujeedo macluumaad oo kaliya. Guddiga Qoraalku ma xaqiijin karo wax natiijooyin ah mana kugula talinayo in akhristuhu uu ku tiirsanaado dhammaan macluumaadka kor ku xusan.